असार ७ गते आइतबार आषाढ कृष्ण औँसीका दिन खण्डग्रास (आधा सूर्य ढाक्ने) सूर्यग्रहण लाग्ने नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ । ग्रहणले बिहान १०ः५० बजे स्पर्श गर्ने छ । मध्याह्न …
मेष(चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) समस्याका खाडलहरु पुर्न अथक प्रयास गर्दा गर्दै विफल हुनुपर्दा तनाव बढ्नेछ । खानपानमा ध्यान दिनुहोला स्वास्थ्यमा समस्या आउनेछ भने दैनिकी प्रभावित हुनेछ । बिषेश गरी चेलि माईतीसँग कुनै कारोबार …
कृष्ण वली र रुपाले आफ्नो फेसबुकमा खुसि हुदै बिबाहको तेश्रो बार्षिक अबसरमा अर्को खुसीको खबर को जानकारी दिएका छन्। केहि समय अघि सामाजिक संजाल मा रुपा कृष्णको जोडी निकै भाइरल …
शुक्रबार (आज) चन्द्रग्रहण लाग्दै छ । यसलाई पीनम्ब्रल चन्द्रग्रहण अर्थात् उपग्रहण भनिएको छ । यो पृथ्वीको मुख्य छायाँको बाहिरी हिस्सा मात्रै चन्द्रमामा पर्ने भएकाले यसलाई पीनम्ब्रल अर्थात् उपग्रहण भनिएको वैज्ञनिकहरुको …
रातमा निन्द्रा लाग्दैन ? प्रयाप्त र गहिरो निन्द्रा नलागेर हैरान हुनुहुन्छ? यसो गर्नुस
May 30, 2020 June 15, 2020 - by admin - LeaveaComment
के रातमा तपाइँको निद्रा बिथोलिन्छ ? रातमा राम्रो र गहिरो निन्द्रा नपर्दा तपाइँको ज्यान भारि हुन्छ? ताजापन महसुस गर्न सक्नु हुन्न? रातभर कोल्टे फेर्दै बित्छ या गहिरो निन्द्रा पर्दैन ? …
सेवा गर्न जादा सामाजिक अभियन्ता भाग्य न्यौपानेको भयो एक्सिडेन्ट
May 24, 2020 June 16, 2020 - by admin
नेपालका चर्चित युट्युबर तथा भिडियो मार्फत सामाजिक सेवामा काम गर्दै आएका भाग्य न्यौपाने बाइक एक्सिडेन्टमा परेर घाइते भएका छन्। यस बारेमा जानकारी उनले आफ्नो अफिसियल फेसबुक मार्फत आफ्ना फ्यान फलोवरलाइ …
शनिदेवलाई प्रशन्न गर्नका लागि गर्नुहोस् शनिबारको दिन गर्नुस यि उपायहरु
विज्ञानको जति नै विकास भएपनि अझै पनि मानिसहरु धर्मशास्त्रलाई पनि उत्तिकै मान्ने गरेका छन् । यदी धर्मशास्त्र मान्नेहरुकाल लागि यहाँ शनिबार केही चिजहरु खान नहुनेबारेमा जानकारी दिन खोजिएको हो । …
मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) आत्मीय मित्र तथा सहयोगीको सहयोग नपाउँदा थालेका कामहरु बीचमा छोड्नुपर्ने हुनसक्छ । समय प्रतिकूल बन्नेछ भने यही बेलामा आय आम्दानीका बाटाहरु साँघुरा हुनेछन् । प्रेम प्रशङ्गमा चिसोपनले जरा …
आजको तपाइको दिन कस्तो छ? हेर्नुस तपाईंको आजको राशिफल
मेष(चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) राजनीति तथा समाजसेवामा जनताको गतिलो समर्थन रहनेछ । परिवार तथा आफन्तजन सँग सँगै रहेर दिन कटाउँन पाउदा मन प्रशन्न रहनेछ । आत्मविश्वासमा बृद्धि हुने हुनाले काम गर्न आँट आउनेछ …
घरमा भुलेर पनि नराख्नुहोस् यी ७ चीजहरु, तपाईलाई पर्न सक्छ आर्थिक संकट !
May 21, 2020 May 23, 2020 - by admin - LeaveaComment
वास्तुशास्त्र अनुसार घरमा कुन ठाउँमा के कुरा राख्ने नियमको पालना गर्दा सुखसमृद्धि प्राप्त हुन्छ । वास्तु पालन नगर्दा भने स्वास्थ्य र धनहानिका अलावा अन्य धेरै समस्याबाट ग्र’स्त भइन्छ ।खराब भएको …